Umbhobho ogqwesileyo wombhobho wokufaka intonga kunye neFektri | Gimarpol
Inkqubela phambili yethu ixhomekeke kwizixhobo eziphezulu, iitalente ezibalaseleyo kunye nokomelela okungagungqiyo kwitekhnoloji yeFektri yeTshayina ye-Threaded Isiphelo esisezantsi seArc esine welding Carbon Steel Pipe API5l / ASTM A252 / ASTM A53 / En10219, ngekhe ubenayo nayiphi na ingxaki yonxibelelwano nathi. Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi ngokubambisana kwishishini.
Ifektri yobuchwephesha kwimibhobho yentsimbi yaseTshayina, i-LSAW, izinto ezininzi zihambelana ngokupheleleyo nezona zingqongqo kwizikhokelo zamanye amazwe kunye nenkonzo yethu yokuhanjiswa kwenqanaba lokuqala uya kuba nazo zisiwe nanini na kwaye naphi na. Kwaye kuba uKayo ujongana nezixhobo zokukhusela, abathengi bethu akufuneki bachithe ixesha bethenga.
Material: Ulwakhiwo Steel ingxubevange
Isicelo: Itonela, ukuqhumisa, ukumbiwa kweMigodi, ukuQaqamba, ukuFumba, iQula lamanzi e-Indutrial, kunye nolwakhiwo lwezixhobo
Ukujongwa kwakhona kunye ne-Bolting, ukubheja kwebhentshi, ukubhola kwemveliso, ukubhola umngxunya omde
Uhlobo lwe-Thread: H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Uhlobo lwentonga: Intonga yolwandiso, intonga ye-Drifter, intonga ye-MF, intonga ye-MF Drifter, ityhubhu yesikhokelo, intonga ye-tapered drill, intsimbi ye-Integral drill, iplagi yomngxunya wentonga
Uhlobo lomzimba: Uhlobo olunamacala, Uhlobo olujikelezileyo
Ubude beRod: 260mm ~ 6400mm
I-CustomDesign: Umsonto, Ububanzi, ubude, umbala unokwenziwa ngokwezifiso
Ifom yoqhagamshelo: uhlobo loqhagamshelo olunomsonto, uhlobo loqhagamshelo lwesikwere, uhlobo loqhagamshelo olunamacala
Bopha Flat: Φ34.0mm, Φ42.0mm, Φ50.0mm
Cone iqhosha: Φ63.5mm, Φ73.0mm, Φ89.0mm
Uhlobo loqhagamshelo lwesikwere: F24, F. 26, F30, F32
Uhlobo loqhagamshelo olunamacala: B34, B35, B41, B45, B55, B41-B42.5, B48-B49
Intsimi yesicelo: Ilungele ukwakhiwa kwemingxunya enzulu kunye neemeko zejoloji ngaphezulu kobunzima obuphakathi.
Umzimba ophambili wombhobho wokugrumba wenziwe ngombhobho wentsimbi okhethekileyo ekumgangatho ophezulu, kunye nokudityaniswa kombhobho wokugrumba kwenziwa ngentsimbi ekumgangatho ophezulu yentsimbi. Yenziwe ngoxinzelelo oluphezulu, unyango lwe-vacuum, i-welding ye-friction, kunye nobunzima bomhlaba ngokubanzi. Ukuqhubekeka kwemisonto kusetyenziswa izixhobo zokuqhubela phambili eziqhubekekayo ukuqinisekisa ukuba nganye ichanekile ngokuchanekileyo kwemveliso nganye. Inempawu zamandla okugoba okuphezulu, i-welding eqinileyo kunye nokusebenza okuphezulu kwe-slag. Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo, amandla okudinwa kunye namandla e-shear aphuculwe kakhulu.
Uyilo olwahlulahlulweyo lwesakhiwo sentsimbi esijikelezayo lunoluhlu olubanzi lwezicelo zokugrumba iimeko zejoloji. Uyilo lolwakhiwo lwentsimbi ephezulu yokujikeleza kufanelekile kulwakhiwo lomngxunya onzulu kunye neemeko zejoloji ngaphezulu kokuphakathi kunye nobunzima, kwaye uyilo lolwakhiwo lwentsimbi ejikelezayo ilungele iimeko ezithambileyo nezithambileyo. Ukugrunjwa komphetho wamalahle kunye nokugrumba kwemithombo yegesi. Inempawu zokukhutshwa kakuhle kwe-slag, inqanaba lomngxunya wokumba kwaye akukho lula ukunamathela.
Egqithileyo I-Rock drill eyayibanjwe ngesandla
Okulandelayo: Umbhobho wokumba wamalahle